Ikhaya-Eyona midlalo yePC yasimahla
Imidlalo yePC yasimahla
I-Robux yasimahla akukho jenereyitha yokuqinisekisa ngo-2022-Roblox
Ijenereyitha yedayimani yoMlilo yasimahla ka-2022 evela garena
Iphepha likaFacebook livula kwiwindow entshaIphepha le-Twitter livula kwiwindow entsha
Abavelisi Aprili 8, 2022
Kule post ndiza kuzama ukucacisa indlela yokufumana i-robux yasimahla ngaphandle kokuqinisekiswa. Njenge…
Umhlali ombi 3 Nemesis: umdlalo owenziwe ngokutsha uya kukhutshwa nge-3 ka-Epreli 2020!
Imidlalo yePC Aprili 1, 2022
Ukwenziwa kwakhona koMhlali u-Evil 3: Ukukhutshwa kwe-Nemesis kucwangciswe kuphela ngo-Epreli 2020 kwaye okwangoku ulungelelwaniso lwePC…
Ubushushu begazi: Ushicilelo lweDijithali Okona kukhutshelwa kwaSimahla-Inguqulelo epheleleyo
Ubushushu beGazi: Ushicilelo lweDijithali sisicwangciso sokudlala indima ekhethekileyo apho kufuneka ulwe namanye amaqela eViking, usinde,…
Batshabalalise Bonke Abantu! Umdlalo wokukhuphela wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
Batshabalalise Bonke Abantu! -Le yimpinda yenye yeyona midlalo idumileyo yakudala, yakudala ...
Ubizo loMsebenzi: iMfazwe yesiBini yePhulo iBuyiselwe
Imidlalo yePC Matshi 18, 2022
Uhlaziyo lwe-Call of Duty: Iphulo leMfazwe yanamhlanje 2 liya kubonelela ngemizobo ehlaziyiweyo ngokucokisekileyo nokwenziwa ngcono, oopopayi, ifiziksi…
Eyona midlalo ili-12 ilungileyo yokudlala simahla kwiPC nakwiMac ukonwabela ngaphandle kokuchitha nesenti
Imidlalo yePC, Reviews, Imidlalo ekuPhezulu Matshi 17, 2022
Ngaphandle kokunyuswa rhoqo kwiivenkile ezahlukeneyo ze-intanethi, ukudlala imidlalo yevidiyo kwiPC kuyabiza. Sinesisombululo...
Uzikhuphela njani iividiyo zikaYouTube simahla
IMovirulz Raya kunye neNyoka yokugqibela (2021)
I-Apex Legends Umdlalo wokuDlala umlo weRoyale Game 2020: Iimpawu ezintsha ezinokuvela kwi-Apex Legends
IGarena yaMahla yoMlilo-Isixhobo seGeneyitha yeDayimane kunye nezinye iindlela ezisi-7 zoku…
AbavelisiBy UMargaret Caffrey Aprili 8, 2022 Ushiye uluvo
Kule post ndiza kuzama ukucacisa indlela yokufumana i-robux yasimahla ngaphandle kokuqinisekiswa. Kanye njengeMinecraft, iRoblox ifumene udumo njengomdlalo osisiseko wabadlali abaninzi obonelela ngamava awodwa kubantwana nakubantu abadala. Kodwa ke, lo ayingomdlalo nje ocacileyo, kodwa ikwayinto enokwenzeka kubaphuhlisi abangafundanga ukuba...
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey Aprili 1, 2022 Ushiye uluvo
Ukwenziwa kwakhona koMhlali ongendawo 3: Ukukhutshwa kwe-Nemesis kucwangciswe kuphela ngo-Epreli 2020 kwaye ulungelelwaniso lwePC sele lukhona. Kwaye iindaba ezimnandi zezokuba ukuba unokubaleka i-RE2, unokuyiqhuba ngokucacileyo. Isibhengezo besisele sidlulile ixesha elide, ngakumbi emva kokupapashwa kwemifanekiso engapapashwanga, kodwa ukwenziwa ngokusesikweni kuhlala…
Ubushushu beGazi: Ushicilelo lweDijithali sisicwangciso esikhethekileyo sokudlala indima apho kufuneka ulwe nezinye izizwe zeViking, usinde, ufumane uzuko olungabonwa nangoThixo, kwaye uzame ukuya eValhalla ngaphambi kokuba kwenzeke iRagnarok… Umhla: Meyi 27, 2020 Uhlobo: Umphuhlisi weQhinga: I-Exozet Platform: I-PC Interface language: IsiNgesi, iMulti5...
Batshabalalise Bonke Abantu! -Le yimpinda yenye yeyona midlalo idumileyo yakudala, imuvi yakudala apho uthatha icala labaphambukeli abakhohlakeleyo kwaye uqale ukutshabalalisa abantu kunye nayo yonke impucuko yabo ebuthathaka… , I-Adventure, iHlabathi eliVulekileyo, uMphuhlisi womntu wesithathu: Imidlalo yeHlathi eliMnyama,...
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey Matshi 18, 2022 Ushiye uluvo
Umnxeba ohlaziyiweyo woMsebenzi: Iphulo leMfazwe yanamhlanje eli-2 liya kubonelela ngemizobo ehlaziyiweyo ngokucokisekileyo ngoburhabaxa, oopopayi, ukusetyenzwa kwefiziksi, ukukhanya kweHDR, nokunye okuninzi. Umnxeba woMsebenzi: Iphulo leMfazwe yanamhlanje eli-2 elibuyiselweyo liya kuxabisa i-24.99 yee-euro. Iza kubandakanya iQela leDemo engaphantsi kwamanzi yeClassic Ghost Bundle yoMnxeba woMsebenzi: Imfazwe yanamhlanje kunye noMnxeba we…
Imidlalo yePCReviewsImidlalo ekuPhezulu
Imidlalo yePC, Reviews, Imidlalo ekuPhezuluBy UMargaret Caffrey Matshi 17, 2022 Ushiye uluvo
Ngaphandle kokunyuswa rhoqo kwiivenkile ezahlukeneyo ze-intanethi, ukudlala imidlalo yevidiyo kwiPC kuyabiza. Sinesisombululo sakho: dlala imidlalo ebalaseleyo yokudlala simahla. Kwaye musa ukuphaphazela, kweli hlathi lezihloko: sahlule ingqolowa kumququ. Ihlobo liyankqonkqoza emnyango wethu, nokuba kwilaptop ukuya…
Ukufa komdlalo wonyaka kwiPS4
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey Matshi 17, 2022 Ushiye uluvo
Indalo yamva nje kaHideo Kojima kunye namaqela akhe ngumbono onzima kakhulu ukuwushwankathela. Imimangaliso yomdlalo wokufa, ihlala ilungile, ithatha imingcipheko nayo. Ngelixa uhlala uyinto edlalwayo, kungaphezu kwayo yonke into elibali ukubandakanya kunye nesithukuthezi sokuthambisa. Umkhethe apha ucacile: khupha umdlali…
AbavelisiBy UMargaret Caffrey Matshi 12, 2022 Ushiye uluvo
IGarena yasimahla yoMlilo-Isixhobo seDayimane seGenereyitha kunye nezinye iindlela ezi-7 zokufumana iidayimani Akukho mathandabuzo malunga nayo - iGarena iphuhlise enye yeyona midlalo yeselula ekhobokisayo. Ifumaneka kuzo zombini iinkqubo ze-iOS kunye ne-Android, iqonga loMlilo lasimahla linomdlalo ongaqhelekanga kunye nabalinganiswa abahlukileyo abenza ukuba babonakale.…
Umdlalo wokukhuphela wasimahla weDanger Scavenger-inguqulelo epheleleyo
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey Matshi 8, 2022 Ushiye uluvo
I-Danger Scavenger kwisitayile se-cyberpunk iya kuxela ibali layo. Ababhali bacebisa ukuba ujoyine iqela labaphilisiwe, ababizwa ngokuba yiScavengers. Uya kujongana nobukrelekrele bokwenziwa obunamandla nobungenamphefumlo. Imilo iya kuba yinto emangalisayo kwaye izaliswe ziziphumo ezahlukeneyo ezinomdla. Awunakudlala wedwa kuphela kodwa nangokumema umhlobo usebenzisa…
Ngaphaya: Umdlalo wokukhuphela imiphefumlo emibini simahla-inguqulelo epheleleyo
Ngaphaya: Imiphefumlo emibini ngummeli ocacileyo wodidi olunqabileyo lwemidlalo. Lo ayisingomdlalo nje, ngumdlalo ochulumancisayo wesci-fi onesakhiwo esichulumancisayo kunye nabalinganiswa abanomdla. Umhla wokukhutshwa: Julayi 22, 2019 Uhlobo: Isenzo, i-Adventure, iQonga lomntu wesi-3: I-PC Interface language: IsiNgesi, iMulti23 Ibali libalisa ngentombazana uJody Holmes...
I-Centralia: Inguqulelo epheleleyo yeKhaya
I-Centralia: Ukubuyela ekhaya ngumdlalo owoyikisayo womntu wokuqala apho uya kusinda kwezona meko zimbi, izilo ezikhulu, iimfihlakalo, namayelenqe, kunye nebali elityebileyo… Ububi bangena kwi-underworld kwaye baqala ukutshabalalisa yonke into endleleni yayo. Abaninzi ngoko, kwi...
ICandelo le-Steel 2 Umdlalo wokukhuphela mahala-Uguqulelo olupheleleyo
ICandelo le-Steel 2 liqhinga leWWII lexesha langempela lenzeka kwi-Eastern Front. Ibandakanya umyalelo osekwe ekujikeni komkhosi kwisikali esi-1: isikali esi-1 kunye neemfazwe ezinobuchule ngexesha langempela, apho amawaka amajoni aya kuba phantsi komyalelo wakho. Dlala njengesiqhelo kumaphulo obuchule aguqukayo omlinganiselo we-1: 1, njengekholoneli...
Imidlalo yelori yeMonster yasimahla yokuKhuphela Umdlalo- uguqulelo olupheleleyo
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey Februwari 17, 2022 Ushiye uluvo
Ukuqhuba ngobuchule ilori yakho enamandla enamavili amakhulu. Categories: Extreme File size: 105.5 Mb DOWNLOAD Inkcazelo yomdlalo Iiseti yemidlalo emi-3 yomdyarho malunga nelori ze-monster – Insane Monster Truck Racing, Monster Truck Safari, kunye ne-Ultra Monster Truck Games Free Download Game– Full Version. Baleka ngokuchasene nabachasi bakho kunye neengoma ezinzima zemiqobo. Iingoma zomdyarho, iisavanna,...
Grand Theft Auto 2 Khuphela Mahala Full-Uguqulelo
IGrand Theft Auto 2 kukuqhubeka kolu luhlu, zonke zikwimilinganiselo emibini. Imizobo kunye ne-injini ziphuculwe. I-GTA II, ukuze ube nokubandakanyeka kokuchas' umthetho. Ababhali babesazi kakuhle ukuba abadlali bafuna ntoni, benza utshintsho bethathela ingqalelo iimfuno zexesha kunye neziphumo zabo. Nantsi lapho…
Umdlalo wokukhuphela wasimahla weHyperParasite-Inguqulelo epheleleyo
I-HyperParasite ngumdlalo oluhlobo lwe-twin stick shooter kunye ne-roquelike, apho isicatshulwa ngasinye sahlukile. Lawula abalinganiswa abangama-60 kwindima ye-parasite yasemzini enobutshaba. Yenza indlela yakho iye phezulu kwikhonkco lokutya: bamba umongameli, cofa iqhosha elibomvu elikhulu, kwaye woyise iintshaba. Ukhuphelo lwe-HyperParasite. Umhla wokukhutshwa: nge-3 ka-Epreli 2020…
I-Ary kunye neMfihlo yeXesha loKhuphelo lwasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
Iqonga le-3D i-Ary kunye neMfihlo yeXesha loNyaka ibonelela ngenkqubo yolawulo enika umdla yamaxesha onyaka kodwa ayibonakali inento eninzi yokunikezela ngaphaya kwayo. Funda ngakumbi kuphononongo. Umphuhlisi: eXiin, Umshicileli wokuLoba iCactus: Umhla wokukhutshwa kweMidlalo yeModus: NgoSeptemba 1, 2020 Intombazana encinci egama linguAriel yintombi yomgadi…
Grey Zone [v 1.0 Ukufikelela kwangethuba] (2020) PC
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey Februwari 9, 2022 Ushiye uluvo
Umdlalo opheleleyo wokukhuphela weGrey Zone-i-RTS shooter enezinto zeRPG. Le yi-odyssey yekhoboka elathi kwikamva elikude livukela iinkosi zalo. Ulinde abalinganiswa abangalibalekiyo, iingxoxo ezihlekisayo, kunye nezenzo ezininzi! Uhlobo: Iqhinga (RTS), RPG uMphuhlisi: Eastworks Umshicileli: IPlatform yase-Eastworks: Uhlobo loPapasho lwePC: Inguqulelo yeLayisensi: v...
Elvenar-umdlalo we-intanethi kunye neqhinga elisekelwe kwi-intanethi
Ukuba ufuna ukonwabela ukudlala imidlalo yeqhinga, ke umdlalo we-Elvenar yindawo yakho. Okokuqala, simahla, lo mdlalo we-intanethi unokuqhutywa kuyo nayiphi na ibhrawuza. Kuyo, unokubandakanyeka kulwakhiwo lwedolophu kwaye ugqibezele imisebenzi ngokuthe ngcembe ukuhlasela iintshaba kwimowudi ye-HOMM. Malunga nabalinganiswa...
Umdlalo we-Intanethi wamaPagan-Inguqulelo epheleleyo
I-Pagan Online ngumdlalo we-isometric we-RPG owenzeka kwihlabathi leentsomi eliphefumlelwe ziintsomi zangaphambi kobuKristu, ezipapashwe nguWargaming (eyaziwa kwiHlabathi lamaTanki). I-Pagan Online ingadlalwa yodwa nangaphezulu kwenethiwekhi, kodwa okokuqala, kufuneka ukhuphele iPagan Online torrent kwikhompyuter yakho njengoko uthanda. UMHLA WOKUPHUMA: 2019 unyaka UHLOBO:…
Goosebumps Dead of Night Free Download Umdlalo-Uguqulelo olupheleleyo
I-Goosebumps Dead of Night ngenxa yamabali othusayo. Umdlalo usekelwe kuluhlu lwamabali "Oothusayo". Hamba kuzo zonke izahluko, ezigcwele iziganeko kunye nabalinganiswa abanemibala. Zonke izilo kunye nabachasi abaza kujongana nazo zilawulwa bubulumko bokwenziwa. Kodwa akayi kukuyekelela, unesibindi. Kubalulekile ukuqaphela isitayile esigqwesileyo se…
Ukubulala eNew York Khuphela Umdlalo wePC simahla
Sebenza kwindawo yolwaphulo-mthetho kwaye utyhile iimfihlo! UBugebenga eNew York Khuphela Umdlalo wePC wasimahla wokuBulala eNew York Ukukhuphela mahala-Uphononongo lweMidlalo yePC Gqibezela uphando! Bamba isikrelemnqa kulo mdlalo omnandi kunye nomlutha ofihliweyo! Joyina abacuphi baseTurino naseLamont abasandula ukutshintshelwa kwiSebe eliKhethekileyo loPhando!…
Umphefumlo oMnyama: Ukusinda kweNdaba emnyama
Umphefumlo oGrim: Ukusinda kweFantasy emnyama ngumdlalo wabadlali abaninzi apho kufuneka umpompe umlinganiswa wakho kwaye uphonononge umhlaba ovulekileyo ozaliswe zizilo ezikhulu, abaphathi kunye nomdlali onobutshaba. Iindawo, izinto, kunye nezidalwa zenziwe ngendlela yefantasy emnyama. Umphefumlo oGrim: Ukusinda kweFantasy emnyama ye-Android ikuvumela ukuba ufunde ubuchwephesha kunye nokwakha eyakho…
UMvuni omncinci (2020) wePC wokukhuphela mahala-uguqulelo olupheleleyo
Gxumeka, ulwe, kwaye uvune indlela yakho kwindawo engaqondakaliyo yoMvuni omncinci njengo-Ollie, umncedisi omncinci weGrim Reaper kweli qonga linemibala yoMvuni uMncinci. U-Ollie wahlala ephethe i-Mansion yoKufa, ngelixa uGrim ethatha iholide efanelekileyo. Umhla wokukhutshwa: Julayi 20, 2020 Uhlobo: I-Arcade, i-Platformer, i-Adventure, uMphuhlisi we-Indie: Umshicileli weMidlalo yoMvuni omncinci:...
USuccubus: Umdlalo ubhengezwe ekugqibeleni. Ndijonge phambili ku-2021/2022!
Imidlalo emitshaBy UMargaret Caffrey Februwari 9, 2022 Ushiye uluvo
I-Succubus ngumdlalo owoyikisayo osisilingisi sokwenyani sokusinda. Kuya kufuneka udlale njengegorhakazi elihle ledemon, elaziwa kwintsomi njenge-succubus. Uya kungena kwihlabathi leentelekelelo zokwenyani zesihogo, apho, nangona ingaqhelekanga, kukho abo bangonelisekanga yindlela izinto eziyiyo. Umhla wokukhupha:…
Idekhi yothuthu (2020) iPC yokukhuphela umdlalo wasimahla-inguqulelo epheleleyo
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey Februwari 3, 2022 Ushiye uluvo
Idekhi yothuthu ngumdlalo we-adventure kunye needabi zamakhadi anobuchule. Omnye emva komnye, khokela iqela lamaqhawe achasene namagorha endleleni yentlawulelo. Jonga ilizwe elimnyama leentsomi kwaye uqokelele amakhadi kwindawo ekhethekileyo yokulwa. Vavanya amandla akho okusinda kunye nokulawula izixhobo ngelixa uphucula inkampu edibeneyo. Umhla wokukhutshwa kweDeck Ashes: nge-9 kaJuni,...
I-Electro Ride: uMdyarho weNeon woMdyarho waSimahla wokuKhuphela-Uguqulelo olupheleleyo
I-Electro Ride: I-Neon Racing- ukubaleka iimoto ze-neon ukusuka kwindawo eyayisakuba yi-East Bloc. Kwenye iYurophu, apho iBloc yaseMpuma ingazange iwe kodwa yajika yaba liziko lobutyebi banaphakade kunye nenkqubela phambili, kulapho udumo lulindelwe khona. Umhla wokukhutshwa koKhuphelo lwe-Electro Ride: Julayi 10, 2020 Uhlobo: Iqonga loMdyarho: Unxibelelwano lwePC: IsiNgesi, iiNkcazo ezininzi
ISIQEPHU ESINYE: AMAGQIRHA AMA-PIRATE 4
One Piece Pirate Warriors 4 libali lesithathu lomntu osilabhayo apho ungazintywilisela kuhambo olutsha lomfo ogama linguLuffy kunye neqela lakhe lamapirate… Umshicileli weTecmo: BANDAI NAMCO Iqonga loLonwabo: Ulwimi lweNdibaniselwano yePC: IsiNgesi, iMulti27 yoLwimi lweLizwi: INkcazelo yesiJapani: I...
I-Sims 4 yedijithali ye-deluxe edition yaSimahla yokuKhuphela Umdlalo-Uguqulelo olupheleleyo
Wonke umntu uyazi ngalo mdlalo. Umhlaba wonke wawulinde ukukhululwa kwenguqulelo ehlaziyiweyo yesifanisi esidumileyo. Kwaye ngoku imini ifikile. I-Sims 4 yedijithali ye-deluxe edition ngoku iyafumaneka kuye wonke umdlali ofuna ukwakha ubomi babo obufanelekileyo ngokwenyani. Abaphuhlisi bakwazile ukuyenza njenge...
Ilifa lokungafi: iJade Cipher
Ilifa lokungafi: I-Jade Cipher ngumxube wokoyikeka kunye nokusinda, umdlalo wesenzo somdlalo onokubonwa ngumntu wokuqala, kunye nomboniso bhanyabhanya. Apha uya kufumana ukuntywiliselwa kwihlabathi leentsomi zaseTshayina kunye neentsomi, i-adventure, kunye nokunye okuninzi…
Jewel Match Solitaire 2. Ushicilelo loMqokeleli
I-Jewel Match Solitaire 2-inxalenye yesibini yomdlalo wekhadi lokuthakatha iya kuphinda ikuthathe kuhambo olumnandi kubukumkani bamaXesha Aphakathi kunye neenqaba zabo ezintle. Jonga iindidi ezininzi ze-solitaire yakudala, ukoyisa imiqobo enzima ngamakhadi omkhenkce navaliweyo, sebenzisa iibhonasi ezinomtsalane kumanqanaba angaphezu kwamakhulu amathathu…
ATOM RPG Trudograd Umdlalo wokukhuphela wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
I-ATOM RPG Trudograd (ATOM RPG Trudograd) liqhinga lokudlala indima-esekwe kwithuba apho kufuneka uye kwihlabathi elitshatyalaliswe yintlekele yenyukliya kwaye uzame ukuyigcina ngobusuku be-apocalypse entsha… Umhla wokukhutshwa: Ukufikelela kwangethuba ngoMeyi. 11, 2020 Uhlobo: RPG, Survival Developer: AtomTeam Publishing: AtomTeam Platform: PC Publication Type: License Version:...
I-Deep Rock Galactic-yokuqala i-sci-fi shooter enombono womntu wokuqala kumdlalo odibeneyo apho uya kufumana indawo epholileyo ye-gnomes, indawo etshabalalayo ngokupheleleyo, iinkqubo zomqolomba ezenziwe ngokwenkqubo, kunye namaza angapheliyo ezilo zasemzini. Iindidi: Imidlalo yama-2020 / abadubuli / iNyathelo / uMntu wokuqala / iHlabathi elivulekileyo / uMhla wokuPhuma ngoMeyi 13, 2020…
I-BULLETSTORM Umdlalo wokukhuphela wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 31, 2022 Ushiye uluvo
Ngaba uyafuna ukudlala umdubuli okhohlakeleyo ngomxube wentsomi kunye nesenzo? Ukwenza oku, udinga nje iBulletstorm yokukhuphela mahala kwiwebhusayithi yethu! Unyaka wokukhutshwa: 2017 Uhlobo: 3D / 2017 / 1st uMntu / uMdubuli / uMphuhlisi wesenzo: Abantu banokubhabha Ulwimi: ENG Ulwimi lweLizwi: ENG Ithebhulethi: IIMFUNO ZENKQUBO YEPLAZA: Windows 7/8 /...
Ngenye imini uya kubuya (2020) PC
Ngenye imini uya kubuya ngumbuzo onzima kakhulu onomxube wokudlala indima-ndima, ukusinda, kunye nokoyikeka, apho kuya kufuneka uye kwiRiphabhliki yaseCzech udlala indima kaDaniel, utata ophulukene nentombi yakhe… Umhla wokukhutshwa. : Ngomhla we-5 kuCanzibe, ngo-2020 Uhlobo: I-Adventure, Ukoyikeka, uMphuhlisi woMntu woku-1: Umshicileli wesoftware ye-CBE: I-CBE software Platform:...
Umdlalo ogqwethekileyo weGrail
I-Tainted Grail ngumdlalo we-adventure odlala indima edibanisa amaqhinga, uphando, kunye nehlabathi elivulekileyo. Uya kufumana uhambo olude noluyingozi, ilizwe elikhulu, iiNPC ezininzi, nokunye okuninzi… Isihloko: Umhla wokukhutshwa kweGrail engcolisiweyo: 2020 Uhlobo: RPG, uMphuhlisi weHlabathi oVulekileyo: Vuka uMpapashi weDijithali: Vuka iiRealms Digital Platform: Inkcazo yePC: Umdlalo…
I-WAR THUNDER Umdlalo wokukhuphela wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
I-Char D2 yitanki ephakathi kwemfazwe yesiFrentshi ephuhliswe ngabakwaRenault njengendlela elula nengabizi kakhulu kwiChar B1. I-WAR THUNDER Ukukhuphela simahla emva kokubethelwa kwamadabi anoburhalarhume ngexesha lokuhlasela kwe-France ngo-1940, u-Char D2 phantsi kweflegi yeRiphabhlikhi yase-French uya kugqabhuka ukuya kumadabi e-War Thunder…
I-TakeOver ngumdlalo wokulwa osekwe ebalini kunye nombono osecaleni, owenziwe kwisitayile se-retro kunye nomxube we "beat 'em up". Apha uya kufumana inani elimangalisayo lamadabi, iyelenqe eligqwesileyo, nokunye okuninzi… Isihloko: Umhla wokukhutshwa kwe-TakeOver: NgoNovemba 10, 2019 Uhlobo: Isenzo, Ukulwa, uMphuhlisi weArcade: Pelikan13 Umshicileli: Iqonga le-Pelikan13: I-PC...
ICONAN EXILES Umdlalo wokukhuphela wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
Ukukhuphela kweConan Exiles ngumdlalo wokusinda wehlabathi ovulekileyo osekwe kwiincwadi ezimalunga noConan umBharbhari. Sinda kwihlabathi elinzima, yakha indlu yakho kunye nobukumkani, utyumza iintshaba kwiimfazwe ezinkulu. Unyaka wokukhutshwa: 2018 Uhlobo: RPG / 3D / uMphuhlisi wesenzo: Funcom Ulwimi: IsiNgesi | IIMFUNO ZENKQUBO YAMULTI INkqubo yokuSebenza: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10...
UMqulu oMdala we-V: Skyrim - uHlelo oluKhethekileyo
I-Elder Scrolls V: Ushicilelo olukhethekileyo lwe-Skyrim luphuculo oluphuculweyo kunye nokwandiswa kwakhona ukukhutshwa kwe-original I-Elder Scrolls V: Skyrim, apho iintshaba ezintsha, izixhobo, iindawo, abalinganiswa kunye nazo zonke ii-DLC zongezwa. Ukongeza, uHlelo lweNtsomi luyilwe ngokutsha imizobo, yongezwa iziphumo ezitsha kunye nokwanda kwemeko yendawo. Umhla wokukhutshwa: 28 Okthobha 2016 Uhlobo:...
I-GTA 4 ecinezelwe kakhulu uKhuphelo lwePC yoHlelo oluGqibeleleyo
I-GTA 4 ecinezelwe kakhulu yokukhuphela iPC ivula indalo yeHD. Olu ngcelele lungumzekelo ocacileyo wokuba inkqubela ayimi. Ababhali babonisa inkqubela eqinileyo. Esinye seziseko zazo zonke iindawo ngumbala oqaqambileyo wolwaphulo-mthetho kuyo yonke into eyenzekayo. Umdlali kuya kufuneka ebe imoto, abulale,…
Jump Force - BANDAI NAMCO Khuphela Umdlalo opheleleyo
Imidlalo yokulwaBy UMargaret Caffrey January 24, 2022 Ushiye uluvo
I-JUMP Force simahla yokukhuphela ngumdlalo wokulwa apho amagorha adumileyo e-anime kunye neemanga zendalo ezahlukahlukeneyo zahlangana: Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, kunye nabanye. Baye badibanisa imikhosi ukuze basindise umhlaba kwisoyikiso esizayo. Umxholo: JUMP FORCE Umhla wokukhutshwa: ngoFebruwari 15, 2019 Uhlobo: Isenzo, Ukulwa, uMphuhlisi we-3D: Spike Chunsoft Co., Ltd. Umshicileli:...
EVERSPACE Umdlalo wokukhuphela wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 24, 2022 Ushiye uluvo
I-Everspace yindawo yomdlali omnye. Izinto ezinje ngeRogue zidityanisiwe kunye nemizobo yanamhlanje kunye nebali elitsalayo. Uya kuqalisa uhambo oluyingozi ngokusebenzisa indalo eguqukayo, enemibala, kunye neyothusayo. Umhla wokukhutshwa: Meyi 26, 2017 Uhlobo: Isenzo, Ukulinganisa, uMphuhlisi onjengeRoguelike: ROCKFISH iQonga leMidlalo yePlatform: Uhlobo loPapasho lwePC: Ulwimi lwesiNxulumanisi seLayisensi: IsiNgesi, kunye neMulti12...
IBHOLA YEDRAGON Z: KAKAROT (2020)
AkohlulwangaBy UMargaret Caffrey January 24, 2022 Ushiye uluvo
I-Dragon Ball Z: I-Kakarot ngumxube wokudlala indima yaseJapan kunye ne-slasher, umdlalo wentshukumo apho kufuneka uye kwindalo yeDragon Ball kwaye uphile ubomi bukaNyana uGoku, umfana onamandla angaphezu kwawendalo… Dragon Ball Z Kakarot Njani ukufumana iiperile zeDragon kwiDragon Ball Z Kakarot, ungafumana ezi-7…
I-Emerald Lake yoKhuphelo lwasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
I-Emerald Lake yinkampu yabantwana esecaleni kwechibi. Le nkampu kudala yashiywa ngenxa yothotho lweziganeko ezingaqhelekanga ezenzeka kudala. Akukho lwazi luchanekileyo malunga nokuba kutheni inkampu yavalwa kwaye yashiywa. Umlinganiswa ophambili, uMichael, waya kule nkampu ukuya kufuna umntakwabo uPetros, owathi...
Iprojekthi yeZomboid yoKhuphelo lwasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
Iprojekthi yeZomboid (iProjekthi yeZomboid) inikezelwe ekusindeni engqongwe zii zombies ezimbi. Unokuchitha ixesha lakho lokuphumla kulo msebenzi umangalisayo. Wedwa okanye, ngoncedo lwabadlali abaninzi, dibana nabahlobo. Imephu ebanzi izaliswe ngamathuba ahlukeneyo okubulala ixesha, ukuzalisa ukutya, kunye nokulwa nabafileyo abenyanyekayo.…
Zombie Army 4: Imfazwe efileyo-Super Deluxe Edition (2020) PC
Umkhosi we-Zombie 4: Imfazwe efileyo yokukhuphela umdlalo opheleleyo wasimahla ubonelela abadlali ngegazi elininzi kunye namadabi ama-epic kunye ne-zombies ezininzi zamaNazi. Ukuba sithetha ngokuchaneka kwembali, ke abaphuhlisi bahlawula ubuncinci bengqwalasela kulo mzuzu, begxininisa kwi-post-apocalyptic component yomdlalo. Eli candelo linendlela edibeneyo-ukuya kuthi ga kwi-4…
Umdlalo wokukhuphela wasimahla weCaliber-Uguqulelo olupheleleyo
Ukukhuphela iCaliber kukudubula umntu wesithathu wabadlali abaninzi apho ukudubula, imisebenzi eyingozi, imisebenzi yokulwa nabanqolobi, ulwandle lwezixhobo, kunye nenyani engazange ibonwe ngaphambili ikulindile ... Kwaye into yokuqala oyithethayo kukuba undoqo wale projekthi umgangatho kwaye ilele kungquzulwano phakathi koMkhosi oKhethekileyo, ondima yawo idlalwa...
Ukukhanya Okumnyama Umdlalo wokukhuphela mahala-uguqulelo olupheleleyo
Ukukhanya Okumnyama yi-sci-fi egcwele iqonga leqonga elinomdlalo owahlukileyo. Kuya kufuneka uhambe kuhambo oluyingozi kwihlabathi le-apocalyptic le-cyberpunk, ehlala izidalwa zamandla angaphezu kwawemvelo. UKhuphelo loKhuphelo lokuKhanya okuMnyama Umhla wokukhutshwa: UFikelelo kwangethuba nge-8 kaMeyi, 2020 Uhlobo: Isenzo, uBukhwenhlo, iPlatformer, uMphuhlisi we-2D: I-Mirari & Co. Platform: Uhlobo loPapasho lwePC: Ufikelelo kwangethuba ulwimi:...
UNimbatus-Umakhi weSithuba seDone
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 21, 2022 Ushiye uluvo
Kulomdlalo, ungumphathi weNimbatus, owona mzi-mveliso mkhulu wedrone kwimbali. Yakha i-drones yakho kwaye ujonge indalo iphela, apho yonke imithetho yefiziksi isebenza. Ukhuphelo lwasimahla lweNimbatus: Ukuze uphile, kuya kufuneka wenze indlela yakho kwiiplanethi ezinokonakala ngokupheleleyo kwiibhayom ezahlukeneyo. Fumana inkululeko epheleleyo yokuyila kunye…
umdlalo Blackthorn Arena simahla kwi PC Review
IBlackthorn Arena sisilingisi somnini webala lemidlalo yegladiatorial, umdlalo apho unokuthi ube ngumnini wenene webala kwaye uzame ukulungisa ama-gladiators aza kulwa kwihlabathi liphela kwaye akuzukise kunye nebala lakho ... Umdlalo wokukhuphela wasimahla uyenzeka. kumhlaba ongeyonyani weMihlaba yaMahala.…
IMinecraft Dungeons Umdlalo wokukhuphela wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
I-Minecraft: I-Dungeons yindalo epheleleyo ye-Mojang, eye yathatha yonke imbali yokudalwa kohlobo lwentolongo yemidlalo yokudlala indima yekhompyutha. Ubutsha buyafumaneka ngokudlalwa kwiikhompyuter zobuqu, iNintendo Shintsha, iPS4, iXbox One kunye neGame Pass. Umhla wokukhutshwa: Nge-26 kaMeyi, ngo-2020 Uhlobo: Isenzo, i-RPG, uMphuhlisi woPhulo: Iqonga leMojang Studios: IPC...
UFury Unleashed Khuphela Umdlalo opheleleyo
Lo ngumdlalo okhawulezayo apho kufuneka ubaleke kwaye udubule macala onke. Amanqanaba enziwe ngokwenkqubo kunye nezinto ezininzi ezingaqhelekanga aziyi kukuvumela ukuba udikwe! Kwaye konke oku kunemifanekiso emihle yanamhlanje ye-2D kwisisombululo esiphezulu. Fury Unleashed download. Umhla wokukhutshwa: ngoMeyi 8, 2020 Uhlobo: Intshukumo, Shoot'em phezulu, uMphuhlisi wePlatform: Imidlalo eyoyikekayo...
ReviewsBy UMargaret Caffrey January 21, 2022 Ushiye uluvo
Ungafuna ukubukela ividiyo kamva, kodwa akuyi kubakho ukufikelela kwi-Intanethi. Mhlawumbi ngomso okanye ngeyure ividiyo iya kususwa ngenxa yesizathu okanye esinye. Siza kukubonisa indlela yokukhuphela iividiyo zikaYouTube simahla kwi-smartphone yakho, ithebhulethi kunye nekhompyuter. Eyona ndlela ilula nekhawulezayo yokukhuphela iividiyo zikaYouTube…
I-Soulcalibur VI kukuqhubekeka koluhlu lwemidlalo yokulwa apho abalwi basebenzisa izixhobo ngokupheleleyo. Kuyo, awona magorha abalaseleyo aphinda alwele ukujongana ngezikhondo zamehlo ukuze afumane ikrele eliyintsomi. Imisitho ikhula ngenkulungwane yeshumi elinesithandathu, ibuyela kwixesha lomdlalo wokuqala kwaye ityhila iinkcukacha ezintsha zento eyenzekayo kwezo…
I-Sniper Elite V2 Remastered (2019)
I-Sniper Elite V2 Ngeentsuku ezimnyama zokuphela kweMfazwe yesibini yeHlabathi, phakathi kwamabhodlo aseBerlin, imbumbulu enye inokutshintsha imbali… Umdubuli we-Elite uKarl Fairburn ubuyela kumgca ongaphambili kwinguqulelo ehlaziyiweyo yalo mdlalo udumileyo osebenza ngokufihlakeleyo. Kwi-Sniper Elite V2Uyi-sniper yase-US ebalaseleyo, uCarl Fairburn,…
Eyona midlalo ibalaseleyo yokulwa kwiPC-khuphela iinguqulelo ezipheleleyo
Imidlalo yokulwaBy UMargaret Caffrey January 21, 2022 Ushiye uluvo
Phakathi kweentlobo ezininzi ezahlukeneyo zemidlalo ye-intanethi, eyona midlalo ilungileyo yokulwa kwi-PC yeyona iqhelekileyo. Kwaye nangona olu hlobo ngokuqinisekileyo lunabathandi balo, okwangoku iiprojekthi eziya kuba "nyulu" imidlalo yokulwa kwi-intanethi ingabalwa kwiminwe. Kukho imali eninzi kwiPC. Uyabuza ukuba oku kuhambelana njani…
FIFA 11 (2010) Umdlalo wokukhuphela wamahala – Inguqulelo epheleleyo
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 17, 2022 Ushiye uluvo
Inkqubo yokuqalisa i-dribbling kulo naliphi na icala ibonelela ngolawulo olupheleleyo kumdlalo. Itekhnoloji yoopopayi yesizukulwana esilandelayo ivumela abadlali bobuchwephesha ukuba babaleke abakhuseli abadlulileyo ngobuchule bokungquba. Imodeli yefiziksi yomdlalo isebenzisa inkqubo yokubala entsha yongquzulwano, enceda ukuqhuba umzabalazo owahlukileyo, onomdla, kunye noqikelelwayo ongaphantsi kwebhola. kunye neBe…
Umdlalo wokukhuphela wasimahla weStoneshard-Uguqulelo olupheleleyo
Ukhuphelo lwe-Stoneshard yibheji empompa simahla kunye nelizwe elivulekileyo apho ulinde iimfazwe kunye nezilo ezikhulu ezahlukeneyo, ukuzingela ubutyebi, imisebenzi emininzi enomdla, kunye nokunye okuninzi ... : I-Ink Stains Games Umshicileli: I-HypeTrain Digital Platform: I-PC, i-PlayStation 6 Uhlobo loPapasho: UFikelelo kwangethuba...
Umdlalo wokukhuphela wasimahla weTemtem-Uguqulelo olupheleleyo
Ekugqibeleni, abaphuhlisi baqala ukunikela ingqalelo kwimidlalo engagxilwanga kuphela kumdlalo wokudlala kodwa nakwicandelo lentlalontle. Namhlanje uya kuba nethuba lokukhuphela iTemtem kwaye uqalise i-adventure enomdla kulo lonke iziqithi ezidadayo. Temtem Khuphela simahla Lo mmandla akufuneki ujongelwe phantsi kuba...
Predator: Indawo yokuzingela yasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
I-Predator: I-Hunting Grounds yi-asymmetric yabadlali abaninzi yokudubula eyenzeka kwihlathi elikude apho i-Predator ileqa elona xhoba liyingozi. Dlala njengenxalenye yeqela eliphakamileyo labantu abane kwaye ugqibezele imisebenzi yokulwa ngelixa uzimele kwiPredator. Okanye thatha indima yePredator kwaye uzingele eyona nto ifanelekileyo…
Imiphefumlo Emnyama 3: Ushicilelo lweDeluxe lwasimahla lokuKhuphela Umdlalo-Uguqulelo olupheleleyo
Umdlalo weMiphefumlo emnyama ye-3 uqulathe umhlaba omkhulu ovulekileyo. Umlingiswa oyintloko ujikeleza ihlabathi elilahlekileyo kwaye ulwa nemimoya emibi ezama ukuqonda isiqalekiso sakhe kunye nokukhangela indlela yokuphuma kule mihlaba emnyama. Udlalela yena, unokumpompa izakhono, unamakrele kunye nomlingo onawo. Umhla wokukhupha: Epreli...
Umdlalo wokukhuphela wasimahla weKenshi-Uguqulelo olupheleleyo
I-Kenshi, umdlalo odlala indima yebhokisi yesanti apho wenza elakho ibali. Abantu bahlala besithi ukuba ligorha kunzima, kodwa akukho mntu uthi kunzima ngakumbi kumntu oqhelekileyo ogqiba ukwenza okulungileyo. Umhla wokukhutshwa kweKenshi simahla: nge-6 kaDisemba, ngo-2018 Uhlobo: RPG, Isifanisi, iQhinga, iSandbox, Vula...
DreadOut 2 Umdlalo wokukhuphela wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
I-DreadOut 2 yokukhuphela simahla kukuqhubeka kwenxalenye yokuqala ye-hardcore eyoyikisayo enombono womntu wesithathu. Ngeli xesha kuya kufuneka uphile njengentombazana egama linguLinda kwisixeko esikhulu, ulwa nezilo ezikhulu, ubaleka iingozi, kwaye wenze okungakumbi… Umhla wokukhutshwa: NgoFebruwari 21, 2020
I-ROMANCE YEZIkumkani zintathu XIV (2020) PC
I-romance ye-Three Kingdoms XIV kukuqhubela phambili koluhlu lwezicwangciso ezisekelwe ekuphenduleni kwisimo saseTshayina. Lwela i-China kunye nayo yonke imimandla eyahlulwe phakathi kwamaqela, zuza impumelelo, kwaye ubhale kwakhona ikamva loBukhosi baseTshayina… Uhlobo: Ubuchule, i-TBS uMphuhlisi: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. I-Platform: ulwimi lwe-PC Interface: IsiNgesi, iMulti5 Inkcazo: Ngokwendalo,...
Umlo weCarnival wokukhuphela umdlalo wasimahla-Uguqulelo olupheleleyo
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 14, 2022 Ushiye uluvo
Umlo weCarnival sisidubuli sokuqhuba esikwi-intanethi esophula zonke ii-stereotypes ezisekiweyo. Ukulwa neentshaba ngesilayidi, imakrofoni, okanye usebenzise izembe lomkhenkce elibukhali! Akukho mithetho kunye nezithintelo - thatha umpu omkhulu kwaye uphule kwi-grinder yenyama enegazi. Unyaka wokuKhupha uMlo weCarnival: 2016 Uhlobo: Isenzo, iMMOFPS, uMdubuli, iQonga le-Intanethi: INkcazelo yePC: Umdubuli wabavukeli wale mihla...
Huntdown (2020) Umdlalo wokukhuphela wasimahla-inguqulelo epheleleyo
Ukhuphelo lwasimahla lweHuntdown: Ukwenza imali kulwaphulo-mthetho kunzima … Ngaphandle kokuba, ewe, ungumzingeli onesisa. Ikamva liseyadini. Izitrato zizele lugonyamelo, amaqela olwaphulo-mthetho alawula esixekweni, yaye amapolisa akanawo amandla, yaye ngabazingeli abanemali kuphela abanokusisindisa isixeko kumakhamandela olwaphulo-mthetho. Yiba…
Umdlalo weHadesi wasimahla wokukhuphela-inguqulelo epheleleyo
IHadesi i-bagel evela kubadali beBastion kunye neTransistor, iziganeko zabo zivela kwihlabathi elisekelwe kwiintsomi zamaGrike, apho kufuneka ucele umngeni kuthixo wokufa. Umhla wokuKhuphela umdlalo weHadesi: Ukufikelela kwangethuba nge-10 kaDisemba, ngo-2019 Uhlobo: Isenzo, iNkcazelo efana neRogue: Isicatshulwa sakho ngasinye esitsha asizufana nesadlulayo.…
I-Yakuza: Njengomdlalo weDlamba wokudlala indima egcweleyo
I-Yakuza: Njenge-Dragon - ingqondo ye-SEGA yenkampani, umdlalo we-adventure odlala indima, isenzo kunye neemfazwe ezisekelwe ekuphenduleni umdla. Umntu oyintloko kumdlalo nguYakuza ophantsi - Ichiban Kasuge. Emva kokuchitha iminyaka eli-18 entolongweni ngenxa yolwaphulo-mthetho angazange alenze, uKasuge ukhululekile kwaye wafumanisa ukuba wonke umntu owayethandwa kakhulu…
Umoya waseMantla Ukhuphelo lwasimahla olupheleleyo-Uguqulelo
Ukhuphelo lwe-Spirit of the North ngumdlalo webali we-indie eyedwa yomntu wesithathu apho uya kufumana uhambo olunemibala nolonwabisayo olugcwele i-adventure, iipuzzle, amaqhina, nokunye ... I-Infuse Studio Publisher: Dibanisa iQonga leMidlalo: iPC, iPlayStation 7 Uhlobo loPapasho: Ulwimi lwesiNxulumaniso seLayisensi: IsiNgesi, iMulti2020...
Le War of Mine free download PC Game Full Version
Le mfazwe yam yokukhuphela simahla- umdlalo kumxholo womkhosi, apho ungacingi ngendima yejoni elinesibindi elisindisa umhlaba, apha uya kuthatha icala lomhlali olula. Isixeko singqingwe kwaye ubumnyama kunye nesiphithiphithi silawula ngeenxa zonke. Ekuphela kwenjongo yakho kukuphila ngokusebenzisa nayiphi na indlela.…
Umsindisi: Umdlalo ongabonakaliyo wokukhuphela umdlalo-Uguqulelo olupheleleyo
Ukusinda: I-Invisible Strain sisixhobo sokusinda esipholileyo apho uya kumhlaba omkhulu wehlabathi untywiliselwe kwisiphithiphithi emva kokuwohloka kwempucuko kunye nokufika kwee-zombies ... , Iqhinga, uMphuhlisi wokuSinda: I-Bob Platform: I-PC Interface language: IsiNgesi uLwimi lweLizwi: Akukho...
Ukungabikho kobulungisa 2: Ushicilelo oluyintsomi
Intswela-bulungisa yesi-2 kukuqhubekeka komdlalo wokulwa okungekho sikweni: Oothixo phakathi kwethu kwaye unika abadlali ukuba bathathe inxaxheba kumadabi phakathi kwabalinganiswa abadumileyo beDC. Inkqubo yezixhobo ezikhethekileyo ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso i-Super Heroes kunye ne-Super Villains, iyenza ibe yodwa. Umsebenzisi unokutshintsha inkangeleko, isitayile sedabi, kwaye enze izigqibo malunga…
IMfazwe Yehlabathi Z-Goty Edition Full Version
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 11, 2022 Ushiye uluvo
Inkampani i-Saber Interactive, kunye ne-studio yeMifanekiso ePhakamileyo, yagqiba ukukholisa abalandeli bomlo osebenzayo kunye ne-zombies. Ngeli xesha baye baphuhlisa umdlalo obizwa ngokuba yiMfazwe yeHlabathi Z, enikezela ukuya kwihlabathi le-zombies kwaye bazame ukusinda kwiinyani ezibuhlungu zongquzulwano. Ungayikhuphela iMfazwe yeHlabathi Z ngoku,…
bhanyaBy UMargaret Caffrey January 11, 2022 Ushiye uluvo
Oopopayi beDisney bakhuphe itreyila yokuqala yefilimu ezayo yoopopayi iRaya kunye neNyoka yokugqibela. Umboniso unika umbono wokuqala we-adventure entsha enopopayi, leyo, ngokungafaniyo neefilimu ezifana noMphefumlo kaPixar, isacwangciswe ukukhululwa kwethiyetha. IMovirulz Raya kunye neDragon yokuGqibela okwangoku iza kubetha imiboniso bhanyabhanya nge-11 kaMatshi 2021.…
I-SnowRunner: Umdlalo we-MudRunner ogcweleyo
Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 10, 2022 Ushiye uluvo
I-SnowRunner sisilingisi esitsha esiguqukayo nesinokwenyani esivela kuFocus Home Interactive, eluqhubekeko lweSpintires eyaziwa ngokubanzi: MudRunner. Abadlali kufuneka bangene kubunyani bomsebenzi oyingozi kakhulu kunye nogqithise kakhulu - umqhubi weelori ezinkulu. Umhla wokukhutshwa kwe-SnowRunner: Nge-28 ka-Epreli 2020 Uhlobo: Ukulinganisa, uMdyarho, uMphuhlisi we-3D: I-Saber Interactive Platform:...
Imidlalo emitshaImidlalo yePC
Ubudala be-Empires uHlelo oluQinisekileyo: Khuphela Inguqulelo epheleleyo yasimahla
Imidlalo emitsha, Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 10, 2022 Ushiye uluvo
Inkcazo yomdlalo: Sinikezela kuwe isicwangciso sakudala somdlalo we-Empires Definitive Edition simahla ukhuphelo olupheleleyo kuhlelo olutsha. Yenziwe ngokuhlonipha uthotho olubhiyozela iminyaka engama-20. Lo mdlalo sisenzo sokwenyani sesicwangciso sekhompyuter, esoyisa iintliziyo neengqondo zabadlali abaninzi kwi…
I-Valorant lukhuphiswano lwasimahla lokudlala umdlalo we-Riot Games
Imidlalo emitsha, Imidlalo yePCBy UMargaret Caffrey January 9, 2022 Ushiye uluvo
I-Valorant ngumdlalo wasimahla we-5 ukuya kwemi-5 wokudubula ovela kwiMidlalo yeRiot (iLeague of Legends) yePC. Ukukhutshwa kweMidlalo ye-Valorant Riot kucwangciselwe i-2020, kwaye abaphuhlisi bathembisa iiseva zasimahla ezinereyithi yethiki ye-128 kubo bonke abadlali kunye nobuncinci be-30 FPS nakwiPC ezindala. Imidlalo yeRiot ikwathembisa…
Imidlalo yePC, Reviews, Imidlalo ekuPhezuluBy UMargaret Caffrey January 9, 2022 Ushiye uluvo
Yiba ngumbulelo odumileyo kwimpumelelo enkulu yeFortnite kunye ne-PlayerUnknown BattleGround (PUBG), uhlobo lwe-Battle Royale luye lwaba yimfuneko kubadlali, kodwa nakwabapapashi bomdlalo wevidiyo. NgoDlalo lweeNtsomi ze-Apex, uBugcisa bobuchwephesha buhambisa umdubuli wabo we-Battle Royale kunye ne-Respawn Entertainment. Umdlalo wevidiyo i-Apex Legends ibhengeza ukuba izobala izigidi ezingama-25…
Ummangaliso! UFrozen 2 ukwiDisney Plus ngoku: bukela imuvi kwi-Intanethi naphi na
Iikhathuni, ReviewsBy UMargaret Caffrey January 8, 2022 Ushiye uluvo
Kangangeminyaka emithandathu, ngaphambi kokufika kweCGI yokwenziwa kwakhona kweNgonyama King, uDisney Frozen wayekumgca wokuqala wodidi lweefilimu ezinopopayi eziphezulu. Kuyamangalisa ukuba uDisney wacinga ixesha elide ngaphambi kokuba aqalise umsebenzi wokulandelelana. Ngokungathandabuzekiyo, iFrozen 2 entsha ikwiDisney Plus ngoku iya kuqokelela kwi…
3MOVIERULZ 2020 -Iwebhusayithi epapasha ngokungekho mthethweni amakhonkco
bhanyaBy UMargaret Caffrey January 8, 2022 Ushiye uluvo
Njengoko sonke siyazi, xa umvelisi etyala izigidi ekwenzeni ifilimu yakhe ye-blockbuster, ngokuqinisekileyo ulindele impumelelo enkulu kunye nenzuzo enkulu ngenxa yoko. Kwaye konke kuxhomekeke xa imuvi ikhutshwa kwiithiyetha kunye nenani elikhulu labaphulaphuli beza kuyibukela. Kodwa kukho…